international short news Archives - Page5of 69 - News @ M-Media
နိုင်ငံတကာသတင်းတို (သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၅)
သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၅ M-Media စပိန်မီးပန်းစက်ရုံပေါက်ကွဲမှု လေးဦးပျောက်ဆုံးနေ …………………………………. စပိန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်း ဇာရာဂိုဇာမြို့အနီးရှိ မီးပန်းစက်ရုံတစ်ခု၌ ယနေ့တွင် ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် လူ ၄ ဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရခဲ့ကာ လေးဦးမှာ ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟု[Read More…]
August 31, 2015 — နိုင်ငံတကာသတင်း
နိုင်ငံတကာသတင်းတို (သြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၁၅)
သြဂုတ် ၂၉၊ ။၂၀၁၅ M-Media ဆွာဇီလန် တွင် ကားမှောက်မှုကြောင့် အမျိုးသမီး ၄၀ နီးပါး သေဆုံး ……………………….. အာဖရိကတိုက် တောင်ပိုင်းရှိ ဆွာဇီလန်နိုင်ငံ ဘုရင့်နန်းတော်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်သည့် ကပွဲတစ်ခုသို့ သွားရောက်စဉ် ထရပ်ကားတစ်စီး[Read More…]
August 29, 2015 — နိုင်ငံတကာသတင်း
နိုင်ငံတကာသတင်းတို (သြဂုတ် ၂၇၊ ၂၀၁၅)
သြဂုတ် ၂၇၊ ၂၀၁၅ M-Media ဆီးရီးယားမြို့ ၃ မြို့တွင် အပစ်ရပ်ရေး သဘောတူညီချက်ရ ………………………………….. သူပုန်များ ခြေကုပ်ယူထားရာ ဆီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရှိ ဇာဘာဒါနီမြို့အပါအ၀င် မြို့ ၃ မြို့တွင် ၄၈ နာရီကြာ အပစ်ရပ်ရေး[Read More…]
August 27, 2015 — နိုင်ငံတကာသတင်း
နိုင်ငံတကာသတင်းတို (သြဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၁၅)
သြဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၁၅ M-Media ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့ အကြီးအကဲကို တရုတ်ထုတ်ပယ် …………………………………. ယခုလအတွင်း လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့သည့် တီယန်ဂျင်းမြို့ ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းများ သိုလှောင်ရုံ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံ၏[Read More…]
August 26, 2015 — နိုင်ငံတကာသတင်း
နိုင်ငံတကာသတင်းတို (သြဂုတ် ၂၅၊ ၂၀၁၅)
သြဂုတ် ၂၅၊ ၂၀၁၅ M-Media တရုတ်စတော့ဈေးကွက် နှစ် ၂၀ အတွင်း အနိမ့်ဆုံးသို့ ကျဆင်း ……………………………………….. ယမန်နေ့က ၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျခဲ့သည့် တရုတ်စတော့ဈေးကွက်မှာ ယနေ့တွင်လည်း ၇.၆၃ ရာခိုင်နှုန်း ထပ်မံကျဆင်းခဲ့ပြီး[Read More…]
August 25, 2015 — နိုင်ငံတကာသတင်း